ကျနော်တောင်းချင်တဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးစေလိုတဲ့ အချုက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် ၀ိုင်း၀န်း အကြံညဏ်ပေး၊ဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုလည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ အဲဒီ ပြသနာတွေကို ကျတော်ပုံနဲ့တကွ Post တင်ပေးချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ပုံက ယူထားပြီတော့ ဘယ်လိုတင်ရမလဲမသိတော့ မတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
<br><b>default pattern files were not installed</b><br>
ဒါကတော့ system စစချင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ Fix вЂ“ it Utilities9professional ကဖေါ်ပြပေးတဲ့ error တစ်ခုပါ။ ဘာအဓိပါယ်လဲဆိုတာ ကျတော်မသိသလို ဘာလိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာလည်းမသိပါ။<br> (2)<b>mstask .exe has generated error and will be closed by windows.<br> you will need to restart program<br> An error log is being created</b><br>ဒါကဒုတိယ error message ပါ။ system စတက်ပြီးလို့ application တစ်ခုခုကို Run တော့မယ်ဆိုရင် တက်လာခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ သူ့ကို ok လုပ်ရင် စက်က restart ပြန်ကျသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်တကြိမ်လည်းစက်ပြန်ဖွင့်ရင် ပြန်ပေါ်လာတယ်ပဲ။
အဲဒီဟာက အပေါ်က error message နဲ့ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိနဲ့ သီးသန့် error message တစ်ခုလားဆိုတာတော့ ကျနော်လည်းမသိဘူး။<br> (3)<b>svchost.exe is</b> <b>has generated error and will be closed by windows <br>
you will need to restart program<br>
An error log is being created</b><br>ဒီတစ်ခုကတော့ အပေါ်က message ကို ok မလုပ်ရင် cancel ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ ပြန်ပေါ်တယ်။<br> ကျ တော်စက်က P4 celeron 2.4 GHz and 512 Ram and 40 GB HDD နောက်ထပ် error ကတော့ စက်လေးနေတဲ့ ပြသနာပါ။ ဒါနဲ့ ကျနော်က ပြသနာတွေဘဲပြောနေတယ်။ ကျနော် စက်နဲ့ပတ်သတ် တဲ့ အကြောင်းတွေမပြောပြရသေးဘူး။ ကျနော်စက်ရဲ့ Detail ကတော့
Bro's Computer ကအဲဒီလောက် လေးနေမယ်။ Error တွေ အများကြီးပေးနေမယ်ဆိုရင် ... Windows အသစ်တင်ဖို့ထိုက်တန်နေပြီလို့ယူဆပါတယ်။ Format ချပြီး Windows အသစ်သာတင်လိုက်ပါ Bro.....
အဲလိုမှမလုပ်ချင်ရင်တော့ ... တခြားတစ်နည်း ။
1 - Scan Disk ( Checking HDD )
2 - Disk Clean-up
3 - Defragment
4 - Tune-up your system with using specific software ( like tune-up 2009 )
- C: အောက်မှ ဖိုင်တွေအများကြီးမထားဖို့လဲပြောချင်ပါတယ်။ C: အောက်ထက်စာရင် အောက်မှာက System အတွက် ပိုပြီး ၀န်ပေါ့သလို အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် Windows ပျက်ခဲ့ရင်လဲ Data ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းပါးပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖူးပါ တယ် (CPU Usage က အမြဲတမ်း ၈၀% အထက်ပဲ)...အကိုပြောတဲ့ error message တွေတော့မတက်ဘူး။
ကျွန်တော် ထင်တာက တော့ Windows ရဲ့ System file တွေ virus ကိုက်ခံရတာလားမသိဘူး...
Repair လုပ်တာလည်းမရဘူး..System Mechanic Pro6နဲ့ ရှိသမျှERROR တွေတောင် fix လိုက်လုပ်သေးတယ်..မရဘူး နောက်ဆုံးတော့ Windows ကိုပြန် install လုပ်လိုက်မှ ကောင်းသွားတယ်။
(အဲဒီ ပြသနာ စဖြစ် တာ က တော့ Windows Media Player နဲ့ Data CD Burn ရာကနေ စတာပါ ပဲ, အကြာကြီး BURN နေလို့ restart ချလိုက်တာလေ...:D)
Haroon wrote: »
ကျွှန်တော်က windows အသစ်တော့ မတင်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမတင်မဖြစ်တော့ရင် တင်ရမှာပေါ့။
စက်ကမတရားလေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ memory usage က 300 ပတ်၀န်းကျင်ပြဲ၇ှိတယ်။ ဒါပေမယ့် cpu က စက်စဖွင့်လို်က်တာနဲ့ 100%ပဲပြနေတယ်။ ကျနော်က cpu ကျွသွားမှာပဲစိုးရိမ်တယ်။ ဒါကြောင့်ပါ။ ပြီးတော် ကျနော်ကြိုးစားကြည့်ခဲ့တာတစ်ခုက windows cd ပြန်ထည့်ပြီး repair လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။ error ပဲပြနေတယ်။
ဒါကြောင် ညီကို တို့ အကြံပေးတဲ့အတိုင်း windows ပြန်တင်ဖို့ပဲကြိူစားကြည့်လိုက်တော့မယ်။
ဒီအတွက်လည်း အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ဒါနတလက်စတည်း ကျွန်တော်ကို နောက်ထပ်နှစ်ခုလောက်အကူညီပေးပါအုံး
1. MZ မှာ ဓါတ်ပုံကိုစာနဲ့ဘယ်လိုတွဲတင်ရမလဲ။
2. ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ ့hardware, software နဲ့ system ၇ဲ့ အကြောင်းရာတွေ၊ အခြေနေတွေကို computer desktop screen ပေါ်မှာ ဖေါ်ပြပေးနိုင်မယ့် freeware လေးများြ၇ှိရင်လည်း မစကြပါအုံး။
[/FONT][FONT=Zawgyi-One][B]cpu က စက်စဖွင့်လို်က်တာနဲ့ 100%ပဲပြနေတယ်။ [/B]
100% ယူသုံးနေတာ ဘယ်ဖိုင်လဲဆိုတာကို Processes Tab ကနေကြည့်ပြီး အကောင်ဆိုရင် အဲဒီဖိုင်ကို End Process ပေးလို့ရတယ်ဗျ။ စက်စဖွင့်ပြီးရင် အဲဒါလေးစလုပ်ကြည့်ပါလား။ ဆေးမြီးတိုပေါ့ဗျာ။ နောက်တစ်ဆင့်က အဲဒီဖိုင် ဘယ်နေရာမှာလည်းဆိုတာရှာပြီး ဖျက်လိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကွယ်ကနေ အဲဒီဖိုင်ထပ်ဆောက်ဖို့ နောက်တစ်ဖိုင် run နေတတ်တယ်ဗျ။ နောက်ကိုယ်မသိနိုင်တဲ့ ဘာတွေလုပ်သွားတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ခက်တယ်ဗျ။ အပန်းမကြီးရင် Data တွေ Backup လုပ်ပြီး ကိုAlexander ပြောသလို Format ချပြီးပြန်တင်တာက စိတ်ရှင်းတယ်ဗျ။
[/FONT][FONT=Zawgyi-One][B]MZ မှာ ဓါတ်ပုံကိုစာနဲ့ဘယ်လိုတွဲတင်ရမလဲ။[/B]
ပုံနဲ့စာတွဲတင်ဖို့က ကိုယ်သုံးမယ့်ပုံကို အရင် upload လုပ်ရပါမယ်။ အဲဒီကရတဲ့ link ကို ယူသုံးတာပါ။ အလွယ်ဆုံးကတော့ MZ က ကိုယ့်အကောင့်အောက်မှာ Albums ဆိုတာရှိတယ်ဗျ။ အဲဒီမှာလည်း upload လုပ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။